ေ ခါ က် ထား - ကိုလေးလွ င် ၊ ပလေးဘွို င် သ န်းနို င် #105046 | Featuring
Home › Music ›ခေါ က် ထား - ကိုလေးလွ င် ၊ ပလေးဘွို င် သ န်းနို င်
ေ ခါ က် ထား - ကိုလေးလွ င် ၊ ပလေးဘွို င် သ န်းနို င်
Published at September 01, 2013
by Ko Kyaw OoDuration: 02:39
Downloadingခေါ က် ထား - ကိုလေးလွ င် ၊ ပလေးဘွို င် သ န်းနို င် mp3 on this site is just for review purpose. If you love the song, please support the artists by buying the original CD/Cassette or buying the song from iTunes.
ဂ ဠု န်တောင် ပံ ဟ န် ပ မာအ တား အ ဆီးများ လွ န်းလှ တာရ ည်းစား ကလေးထား မိ ရာအ စ် ကိုတွေမောင်တွေ ဆို တာဓါးကြိ မ်းကြိ မ်းသ မို့ကြောက် စ ရာအ ရဲ စွ န့် လို့တော့ သွား ရ မှာေ ခါ က် ထားခေါ က် ထား ကြ ည် ပါ တ ယ် အပေါ င်းအ သ င်းတို့ ရှိ သားခေါ က် ထားခေါ က် ထား ကြ ည် ပါ တ ယ် အပေါ င်းအ သ င်းတို့ ရှိ သားခေါ က် ထား သူ င ယ် ချ င်းလူ င ယ် လူ ရွ ယ် ဆို တာအ ချ စ် နဲ့ မ က င်းကြ ဘူးဗျ သူ့ နှ မ ကို ယ့် နှ မ ပိုးကြ မှာကြ င် နာသူ ကို မြ င် ချ င် တာအ သ ည်းနှ လုံးထဲ က အ ဖြ စ် ပါကြောက် ရွံ့ ခြ င်းလ ည်းက င်းေ တာ့ တာေ ခါ က် ထားခေါ က် ထား ကြ ည် ပါ တ ယ် အပေါ င်းအ သ င်းတို့ ရှိ သားခေါ က် ထားခေါ က် ထား ကြ ည် ပါ တ ယ် အပေါ င်းအ သ င်းတို့ ရှိ သားခေါ က် ထား သူ င ယ် ချ င်း
Watch video on Youtube:ခေါ က် ထား - ကိုလေးလွ င် ၊ ပလေးဘွို င် သ န်းနို င်
Search another results:ခေါ က် ထား - ကိုလေးလွ င် ၊ ပလေးဘွို င် သ န်းနို င်
Post related toခေါ က် ထား - ကိုလေးလွ င် ၊ ပလေးဘွို င် သ န်းနို င်:
[03:01]ကြေးနား က ပ် ကြီးပ န် ရ မ ယ် - ပလေးဘွို င် သ န်းနို င်By Ko Kyaw Ooဆံ ပ င် ရှ ည် ရှ ည် ထား တဲ့ � ...
[04:50] သန်းနိုင် (ဆု)By nandar28မင်းလေးကိုဘယ်သူ့မှမပေးန� ...
[03:12] အဝါရောင်လမ်းကလေး သန်းနိုင် ၁၉၈၇By NYEINCHAN AYEတေးရေး - သုခမိန်လှိုင် တေ� ...
[04:21] လမ်းဆက်လျှောက်မယ်-သန်းနိုင်By Ko Kyaw Ooလမ်းဆက်လျှောက်မယ်-သန်းနိ ...
[05:31] ဆ ည်းလ ည်းလှို က် သံ - ခ င်မောင် တိုးBy Ko Kyaw Ooဆ ည်းလ ည်းလှို က် သံ - ကိုေ...